people Nepal » आज भाद्र १२ गते / अगस्त २८ तारिख सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस् आज भाद्र १२ गते / अगस्त २८ तारिख सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस् – people Nepal
आज भाद्र १२ गते / अगस्त २८ तारिख सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज श्री शाके १९३९विक्रम सम्वत २०७४साल भाद्र १२ गते सोमबार इश्वी सन् २०१७ अगस्त २८ तारिख भाद्र शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथी चन्द्रमा तुला राशिमा ०२:५९ बजे सम्म पश्चात बृश्चिक राशिमा सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भ. पु. मंगलकुण्डमेला, गौरासप्तमी, अमुक्ताभरणसप्तमी
दाम्पत्य सम्बन्धमा साधारण समस्या देखा पर्नेछ । मानसिक चन्चलताले सामान्य कार्यका निम्ति धेरै समय खर्चनु पर्ला । आफुभन्दा सानाको हितका लागी समय तथा पैसा खर्च गर्नु पर्नेछ । बोलि तथा खानपानको क्षेत्रमा विषेश सजग रहनु होला । बिद्या क्षेत्र भने मध्यम रहनेछ ।
सामान्य खर्चको योग रहेको छ । तपाईको कार्यको आलोचना बढ्न सकनेछ । मानसिक तनाबको सामना गर्नु पर्ला । अरुको बिश्वासमा गरीएका कार्यहरुमा सामान्य झझट पैदा हुन सक्ला । अनायासै यात्राको सम्भाबना रहन सक्नेछ । मान्यजनको साथ सहयोगमा गरीएका कार्य भने सफल रहलान ।
सन्तान को स्वास्थमा समस्या देखा पर्ला । बौधिक ब्यक्तित्व सँगको भेटघाटले मन हर्सित तुल्याउला । बिद्या क्षेत्र भने अधुरो रहनेछ । पारीवारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । आम्दानि क्षेत्र भने मध्यम रहेको छ । आँट र शाहासको बृद्यि हुनेछ ।
सभा समेलनमा सरीक हुने योग रहेको छ । पारीवारिक साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मद्दत पूग्नेछ । परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ । मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । काम कार्यको क्षेत्रमा बिषेश ध्यान दिनु होला ।
मनमा कुबिचारको भाब पैदा हुनेछ । शारीरिक अस्वस्थाका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । मान्य जनको साथ सहयोग पुर्ण रुपमा प्राप्त नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । माल सामान को क्षति ब्यहोर्नू पर्ला सजग रहनु होला । खानपानमा ध्यान दिनु होला ।